Kuhle noma kubi ukuthi inja ikukhothe ebusweni? | Izinja Umhlaba
Cabanga ngesimo. Ufikile ekhaya futhi uzwa inja yakho ikhonkotha ngakolunye uhlangothi lomnyango. Uyajabula ukuthi ubuyile futhi okudingayo ukuthi ususe leso sithiyo. Futhi uma wenza ukukushaya ngamandla bese eqala ukukukhotha ubuso. Ingabe kuzwakala ujwayelekile kuwe?
Lokhu kuziphatha okwenziwa yizinja futhi okuyindlela yokuxhumana nawe, kwesinye isikhathi kuyamukelwa kahle kanti kwesinye isikhathi akunjalo. Kepha kufanele uvumele inja yakho ikhothe ubuso bakho? Ake sikhulume ngakho.
Lokhu kubonakala kungenangozi, ubeka ikhala lenja yakho ekhaleni ngenkathi ukhuluma naye, itiye likhotha izindebe zakhe noma izihlathi ngolimi lwakhe noma lapho ubuya emsebenzini uletha izindebe zakho enjeni yakho ukubingelela.
Lokhu kungazizwa njenge- umbukiso wothandoKepha uma ufuna ukumnika lokhuqabula, ochwepheshe bayeluleka ngokungakwenzi. ¿Uyini umonakalo?
1 Kungani izinja zihlala zifuna ukukhotha ubuso bakho?
2 Izinkinga zokuqabula inja engakutholi konke ukunakekelwa okudingekayo
2.1 Yiziphi ezinye izifo ezingadluliselwa?
3 Ngakho-ke kuhle ukuthi bayakwenza?
4 Into enhle ngenja yakho ikhotha ubuso bakho
4.1 1. Kukuvikela ezinsikeni zomzimba
4.2 2. Uyakukhathalela
4.3 3. Nguwe umphathi
4.4 4. Thuthukisa imizwa yakho
4.5 5. Umnika nezokuvikela
Kungani izinja zihlala zifuna ukukhotha ubuso bakho?
Okwenja, ukukhotha, ukukhotha, kuyindlela yokuxhumana. Ngalokhu, akwenzayo ukukutshela ukuthi ungumngani wakho nokuthi uyakwazisa. Ngaphezu kwalokho, kungukuziphatha abakuthola besebancane. Isibonelo, lapho inja yesifazane izala imidlwane yayo, into yokuqala eyenzayo ukuyikhotha ukuze uyihlanze, futhi nokuyifudumeza. Kungakho beyifunda ngokushesha okukhulu. Njengoba bekhula, basebenzisa leyo ndlela yokuziphatha nomama wabo, nabafowabo futhi yebo, nawe. Ngoba umdlwane awukaze uzame ukukukhotha?
Kulungile manje Ngaphandle kokuba nencazelo yothando, kubuye kube nelukuluku. Abahloli imvelo ngezandla zabo, futhi abathinti konke abakubonayo ukuthola ukuthi kuyini. Basebenzisa imilomo yabo ukwenza lokho. Ngakho-ke bayakhotha, balume, nezinye izindlela zokuziphatha. Kubo kuyithuluzi eliwusizo kakhulu abalisebenzisa njalo ngambili kathathu, ngoba ibanikeza ulwazi oluningi, hhayi kuphela ngento uqobo lwayo, kodwa nangezinye izinto eziningi.
Ngalesi sizathu, inja iyakujabulela ukukhotha umlomo, izandla noma izinyawo, ngoba kuyimithombo yesithakazelo kubo, yolwazi oluningi. Eqinisweni, ngale ndlela bangakwazi ukwazi imizwa yakho, noma ngabe uyagula (khumbula ukuthi kunamacala amaningi lapho abantu bazi khona ukuthi bebegula ngenxa yesilwane sabo, abangeke bayeke ukukhotha noma ukuzama ukuluma ukuze badabule indawo ethile umzimba wakhe).
Ukuphika lokho kuziphatha akulungile, kepha futhi akushiyi kube yintando yakho. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi kufanele uthole iphuzu eliphakathi nendawo ukuze lingacasuli, futhi ngasikhathi sinye unikeze inja yakho lolo lwazi noma lelo thuba lokukubonisa uthando analo ngawe.
Izinkinga zokuqabula inja engakutholi konke ukunakekelwa okudingekayo
El UDkt Neilanjan Nandi ngubani ongumuthi osizayo eDrexel University School of Medicine futhi otholakala ePhiladelphia, kusho nge-imeyili ukuthi iningi lemilomo yezinja linenani elikhulu lamagciwane, isikhunta namagciwane. Lo dokotela usho lokho amathe enja anamaprotheni athile lokho kungasiza ekuhlanzeni noma nasekusizeni ukupholisa amanxeba yize ebhale incwadi enesihloko esithi "Kungani ungasiphuzi isilwane sakho?".
Wakusho lokho kunezinto eziphilayo ezihlukile ezinjeni ukuthi abantu abakwazi ukulwa noma ukubekezelela. Amanye amabhaktheriya asemlonyeni wezinja owaziwa nge-E Coli, clostridium, camplylobacter kanye ne-salmonella, angadala lokhu izifo emathunjini nasesiswini wabantu.
Iqiniso ukuthi akudingeki sivumele inja yethu ikhothe ubuso bethu, ngoba lapho amathe enja ethinta isikhumba somuntu esinganyakazi ikakhulukazi umuntu ophila impilo enempilo, akunakwenzeka ukuthi abe nezinkinga ngenxa yalokhu, noma ngabe amathe ezinja namagciwane angangena kalula ngokusebenzisa ulwelwesi lomlomo, amehlo namakhala kanti yize izifo ezidluliswa ngale ndlela zingajwayelekile, uDkt Kaplan uncoma vimbela inja ukuthi ikhothe izingxenye ezithile zobuso.
Ngakolunye uhlangothi, uDkt John Oxford waseQueen Mary University yaseLondon, ongungoti wezifo ezincane eziphilayo, ukusho lokho inja akufanele nanini ivunyelwe ukukhotha ubuso babantu, ngoba akusikho ukuthwala amathe kuphela kepha futhi bahogela ezindaweni ezingathandeki futhi baze bazwe nephunga lezinye izinja, ngakho umlomo wakho ugcwele amagciwane, amagciwane kanye namagciwane.
Yiziphi ezinye izifo ezingadluliselwa?
Kulezi zimo, ezinye izifo ezinjengezibungu kanye / noma ama-hookworms zingabonakala ezingadluliselwa kumkhuba othola igama le coprophagia, kuphi izinja zidla indle yabanye abantu noma ukhothe izigaxa zezinye izinja, lokhu kushiwo nguDkt Nandi. UDkt Joe Kinnarney owayengumongameli we-American Veterinary Medical Association futhi ocwaningweni wakukhombisa lokho umdlwane ungaba namaqanda aphakathi kwesibungu aphakathi kwezigidi ezingamashumi amabili emathunjini akhe emathumbu Esontweni elilodwa, singafaka nodaba lomfana waseNyakatho Carolina owalahlekelwa iso ngenxa yokutheleleka kwesikelemu.
¿Kukhona nezinye izingozi? UDkt Neilanjan Nandi uthi abantu badinga ukukuqaphela lokho akuzona zonke izinja ezifuna ukwanga nokugona. Imvamisa abantu abazi ukuthi izinja zesaba nini, zinolaka noma zingaphansi kwengcindezi futhi uma ungaqapheli futhi ubeke ubuso bakho eduze kwenja lokhu kungadala ukulunywa kanzima.
Namakati? Mancane amathuba okuthi abantu batheleleke ngamakati ngoba abayidli indle, yize umlomo wamakati ungathola amagciwane abizwa ngePasteurella, angadala i-lymph node kanye nokutheleleka kwesikhumba, lesi sifo saziwa ngokuthi umkhuhlane wekati.
Ukugwema konke lokhu, ochwepheshe batusa ukugwema ukuthi izilwane ezifuywayo zikuqabule, nawe kufanele qiniseka ukuthi isilwane sakho sisesikhathini nayo yonke imigomo yaso, kufanele ugcine isilwane sakho kude nendle futhi kufanele ugeze izandla zakho njalo ngensipho namanzi.
Ngakho-ke kuhle ukuthi bayakwenza?
Iqiniso ukuthi kuningi futhi okuphikisana nenja ekhotha ubuso. Futhi iqiniso ukuthi, uma ubuyekeza okuncane, uzokwazi ukuthi kukhona zombili "izinzuzo" kanye "nezinkinga" ezingaba nemiphumela emibi. Ngakho-ke, ingabe kulungile?
Kumele ukubheke lokho inja ayigcini inhlanzeko yomlomo wayo noma yamakhala. Ngaphakathi emlonyeni nasemazinyweni kunamagciwane angakutheleleka kulokho kukhotha. Kepha lokho akusho ukuthi awukwazi ukucabanga ukuthi inja yakho ikukhotha.
Eqinisweni, Uma nje inja inakekelwa kahle, igonywe ngokuphelele, ikhishwa izikelemu futhi isempilweni enhle, akumele kube nenkinga. Kodwa-ke, kubalulekile futhi ukuthi, uma ekhotha ubuso bakho, wenze inhlanzeko enhle. Okusho ukuthi, geza ubuso nezandla zakho ngemuva kwaleyo khotha, ukuze uqede izinkinga ezingaba khona.
Akufanele kube isimilo esisikhuthazayo, njengoba izinja zizokufunda maduze futhi zizohlala zifuna ukukwenza, kepha inqobo nje uma isilwane sakho sinakekelwa kahle, akufanele sibangele inkinga. Vele, noma kunjalo, kufanele uqaphele.
Into enhle ngenja yakho ikhotha ubuso bakho
Uma uke waba nenja, impela ngezikhathi ezithile uye waya kuye futhi wakukhotha ubuso. Ngaleso sikhathi kungenzeka ukuthi ube nokusabela okuhle, okusho ukuthi, awunandaba futhi ungithanda nokuthi ngikwenze; noma okubi, ukukusunduza bese ugeza ubuso bakho ngoba lokho kuziphatha kukwethusa.
Yebo, njengoba sikutshele ngaphambili, kunabaningi abamelene noma abamelene nakho. Kepha zithini izimpikiswano zomuntu ngamunye?
Lapha uzohlangana yiziphi izinzuzo zokuvumela inja ikukhothe ubuso bakho. Ingabe uyavumelana nalezi zitatimende?
1. Kukuvikela ezinsikeni zomzimba
Kholwa noma ungakukholwa, kunjalo. Amasosha omzimba esinawo ayaqiniswa uma unenja futhi mayikukhothe ebusweni (inqobo nje uma iphilile, kunjalo). Isizathu ukuthi, njengoba uxhumana nesilwane, kusiza ukuzivikela kwakho ukuthi kuphakame ngoba zihlala zilungiselelwe noma yimuphi umenzeli oyingozi. Eqinisweni, ochwepheshe bathi kuhle ukugwema ukungezwani komzimba noma ngisho nesifo somoya.
Uma ubuza udokotela noma uchwepheshe mayelana nokuthi ngabe ingane ikhuliswe kangcono nenja noma iyodwa, iningi likutshela ukuthi isilwane singasiza ingane ukuthi ibe nesistimu yomzimba enamandla, ngaphezu kokuzijabulisa kangcono, nokuba nezinye izinzuzo. Ngakho uyasiphikisa lesi simangalo.
Enziwa yini ama-bitches ngemidlwane yawo? Bazikhotha njalo lapho bebancane ukuze banikeze imfudumalo, ukubahlanza, ukubanikeza ukufudumala ... Hhayi-ke, into efana naleyo yenza ngawe. Akufunayo ukuthi uphile.
3. Nguwe umphathi
Ukuze 'kugcinwe ukuthula', izinja ziyakhuthazwa ukuthi zikhothe lowo ezibona njengomphathi, isimilo sokuzithoba ukuze ziqonde ukuthi azinendaba nje kuphela kepha futhi bona ukuthi ngubani onamandla kulobo budlelwano.
4. Thuthukisa imizwa yakho
Ushaye khona. Uma ufika ekhaya unengcindezi, ungafuni ukukhuluma noma abanye bathi noma yini kuwe, kuthi inja yakho ize kuwe ikukhothe, noma ngabe awuyithandi, ingashintsha imizwa yakho ikwenze umomotheke. Futhi lokho kuyakuthola ukwandisa amazinga akho e-dopamine ne-serotonin. Ukukhotha okulula kuyakwazi ukwenza lokhu (nokukhiqiza umuzwa ofanayo njengalapho bekuqabula).
5. Umnika nezokuvikela
Njengoba esiza uhlelo lwakho lokuzivikela, nawe uyamsiza, ngoba ama-microorganisms esinakho yenza amasosha omzimba wakho nawo azuze futhi uhlale ukhuthele ukumelana nabasebenzeli bangaphandle.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » Uyayivumela inja yakho ikhothe ubuso bakho?
Izizathu zokuthi kungani inja iphuza amanzi futhi iyahlanza
Kungani inja yami iyaxhuga ngomlenze owodwa wangemuva?